Google က Pixel3XL ကို တမင် Leak လုပ်ပြီး နောက်ပြောင်နေတာလား?
Google လိုမျိုး လက်ရှိမှာ အကြီးမားဆုံး Software ကုမ္ပဏီကြီးက သူ့ရဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေကို ၆ လလောက်အလိုထဲက သတင်းပေါက်ကြားစေခဲ့တာက မတော်တဆမဟုတ်ဘဲ တမင်လုပ်တာဖြစ်နိုင်မလား?
ဒါကအခုအချိန်အထိ များစွာသော Hands-on Test တွေ၊ Unboxing Video တွေနဲ့ Review Video တွေအထိ Google က Launch Event မလုပ်ခင် အချိန်တော်တေ်ာကိုစောပြီးတက်လာတာတွေကနေ စပါတယ်။ နောက်ပြီး ထူးဆန်းတာတစ်ခုက အခုထွက်လာတဲ့ Leak သတင်းတွေအကုန်လုံးနီးပါးက Google Pixel3ထက် Google Pixel3XL ဖြစ်နေတာပါ။
ယခု Leak ဖြစ်နေတဲ့သတင်းတွေအရ Google Pixel3XL ဟာ တော်တော်လေးကို အရုပ်ဆိုးတဲ့ Notch ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ လက်ရှိ Reviewer တွေအတော်များများကလည်း Google Pixel3XL ရဲ့ Notch ကိုပဲ အဓိကတိုက်ခိုက်ပြီးပြောနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Google က ဒါကိုလည်း တမင်လုပ်နေတဲ့ပုံပါပဲ။
ဒါကိုသေချာစေခဲ့တာကတော့ မနေ့ညက Google က သူ့ရဲ့ Made By Google Social Media Account တွေမှာ Video တစ်ခုကို တင်ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ Google က “So you think you know… Tune in tomorrow to see for yourself.” ဆိုပြီး လက်ရှိ Tech Reviewer တွေရဲ့ Google Pixel3ဖုန်းအကြောင်း အကုန်သိနေပြီလို့ ပြောကြားထားတဲ့ Clip တွေကိုတစ်ခုထဲအနေနဲ့ စုစည်းပြီးတော့ ဖော်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
အခု Video အရ Google က တမင်ကို Google Pixel3XL ဖုန်းကို Leak ပြုလုပ်ထားသလားဆိုတာက ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Google က Tech Industry တစ်ခုလုံးကို လှောင်ပြောင်ဖို့များ တိတ်တဆိတ်ကြံစည်နေတာတောင် ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
Google Pixel3XL ဖုန်းဟာ အခုအချိန်မှာ Engadget ၊ Android Authority နဲ့ တခြားသော Reviewer တွေကတောင် Review တွေပြုလုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့ဖုန်းတစ်ခုပါ။ အဲ့ဒီအတွက် အခု Pixel3XL က သေချာနေပြီတောင်ပြောလို့ရနိုင်ပေမယ့် ရုရှား Review Video တစ်ခုမှာတော့ အဆိုပါ Google Pixel3XL ကို Wi-Fi ချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ အဆိုပါ Unit ကို Block လုပ်ခံလိုက်ရပြီး Recovery Mode ကိုပါ ဖယ်ရှားခံလိုက်ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါက Google က တမင်ပဲ Google Pixel3XL Unit တွေကို Leak လုပ်လို့ရအောင် ထုတ်ပေးထားပြီးတော့ Event မတိုင်ခင်မှာ ပိတ်သိမ်းတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဲ့ဒါကြောင့် ဒီနေ့ည ၉ နာရီမှာ ပြုလုပ်တော့မယ့် Google Event မှာ Pixel3ဖုန်းတွေကို Leak ဖြစ်လာတဲ့အတိုင်းပဲတွေ့ရမလား… တစ်ကြိမ်မှ တွေ့ဖူးသေးမရှိသေးတဲ့ Google Pixel ဖုန်းတွေများတွေ့လာရမလားဆိုတာကတော့ တကယ်ကို စိတ်လှုပ်ရှားစရာပါ။
Akhayar ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ရော ဘာကိုမျှော်လင့်နေပါသလဲ?
Google လိုမြိုး လကျရှိမှာ အကွီးမားဆုံး Software ကုမ်ပဏီကွီးက သူ့ရဲ့ စမတျဖုနျးတှကေို ၆ လလောကျအလိုထဲက သတငျးပေါကျကွားစခေဲ့တာက မတျောတဆမဟုတျဘဲ တမငျလုပျတာဖွဈနိုငျမလား?
ဒါကအခုအခြိနျအထိ မြားစှာသော Hands-on Test တှေ၊ Unboxing Video တှနေဲ့ Review Video တှအေထိ Google က Launch Event မလုပျခငျ အခြိနျတျောတျောကိုစောပွီးတကျလာတာတှကေနေ စပါတယျ။ နောကျပွီး ထူးဆနျးတာတဈခုက အခုထှကျလာတဲ့ Leak သတငျးတှအေကုနျလုံးနီးပါးက Google Pixel3ထကျ Google Pixel3XL ဖွဈနတောပါ။
ယခု Leak ဖွဈနတေဲ့သတငျးတှအေရ Google Pixel3XL ဟာ တျောတျောလေးကို အရုပျဆိုးတဲ့ Notch ပါဝငျလာမှာဖွဈပွီးတော့ လကျရှိ Reviewer တှအေတျောမြားမြားကလညျး Google Pixel3XL ရဲ့ Notch ကိုပဲ အဓိကတိုကျခိုကျပွီးပွောနကွေတာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Google က ဒါကိုလညျး တမငျလုပျနတေဲ့ပုံပါပဲ။
ဒါကိုသခြောစခေဲ့တာကတော့ မနညေ့က Google က သူ့ရဲ့ Made By Google Social Media Account တှမှော Video တဈခုကို တငျခဲ့တာကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒါကတော့ Google က “So you think you know… Tune in tomorrow to see for yourself.” ဆိုပွီး လကျရှိ Tech Reviewer တှရေဲ့ Google Pixel3ဖုနျးအကွောငျး အကုနျသိနပွေီလို့ ပွောကွားထားတဲ့ Clip တှကေိုတဈခုထဲအနနေဲ့ စုစညျးပွီးတော့ ဖျောပွသှားတာဖွဈပါတယျ။
အခု Video အရ Google က တမငျကို Google Pixel3XL ဖုနျးကို Leak ပွုလုပျထားသလားဆိုတာက ပိုပွီး စိတျဝငျစားစရာဖွဈလာပါတယျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ Google က Tech Industry တဈခုလုံးကို လှောငျပွောငျဖို့မြား တိတျတဆိတျကွံစညျနတောတောငျ ဖွဈနနေိုငျပါတယျ။
Google Pixel3XL ဖုနျးဟာ အခုအခြိနျမှာ Engadget ၊ Android Authority နဲ့ တခွားသော Reviewer တှကေတောငျ Review တှပွေုလုပျနပွေီဖွဈတဲ့ဖုနျးတဈခုပါ။ အဲ့ဒီအတှကျ အခု Pixel3XL က သခြောနပွေီတောငျပွောလို့ရနိုငျပမေယျ့ ရုရှား Review Video တဈခုမှာတော့ အဆိုပါ Google Pixel3XL ကို Wi-Fi ခြိတျဆကျလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ အဆိုပါ Unit ကို Block လုပျခံလိုကျရပွီး Recovery Mode ကိုပါ ဖယျရှားခံလိုကျရတယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒါက Google က တမငျပဲ Google Pixel3XL Unit တှကေို Leak လုပျလို့ရအောငျ ထုတျပေးထားပွီးတော့ Event မတိုငျခငျမှာ ပိတျသိမျးတာမြိုးလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။
အဲ့ဒါကွောငျ့ ဒီနညေ့ ၉ နာရီမှာ ပွုလုပျတော့မယျ့ Google Event မှာ Pixel3ဖုနျးတှကေို Leak ဖွဈလာတဲ့အတိုငျးပဲတှရေ့မလား… တဈကွိမျမှ တှဖေူ့းသေးမရှိသေးတဲ့ Google Pixel ဖုနျးတှမြေားတှလေ့ာရမလားဆိုတာကတော့ တကယျကို စိတျလှုပျရှားစရာပါ။
Akhayar ပရိသတျတှအေနနေဲ့ရော ဘာကိုမြှျောလငျ့နပေါသလဲ?